လောက မှာ အဆိပျမရှိတဲ့ သူက အန်တရာယျ အကငျးဆုံး (အလှနျကောငျးတဲ့ အတှေးအချေါ) - Barnyar Barnyar
လောက မှာ အဆိပျမရှိတဲ့ သူက အန်တရာယျ အကငျးဆုံး (အလှနျကောငျးတဲ့ အတှေးအချေါ)
(မွှဟေောကျ တဈကောငျက ကြှနျတျော့ကို ပွောတယျ)
“ငါကလြှငျမွနျတယျ… အဆိပျရှိတယျ… ငါ့ကို လူတှကွေောကျကွတယျ” တဲ့” “ကြှနျတျောသူ့ကို အရမျးအားကမြိတယျ… သူ့လို လြှငျမွနျပွီး အဆိပျရှိတဲ့ မွှေ ဖွဈခငျြခဲ့တယျ”
“နောကျနမှေ့ာ ကြှနျတျော မွှပှေေး တဈကောငျနဲ့တှတေ့ယျ… မွှပှေေးက ကြှနျတျော့ကို ပွောတယျ”
“ငါက တညျငွိမျတယျ… ငါ့ဟာငါ အေးဆေးနတေယျ .. ငါ ဘယျသူ့ကို မှ ရနျမရှာဘူး… ဒါပမေယျ့ ငါ့ကိုတော့ လာမထိနဲ့ ယငျကောငျတောငျ အလှတျမပေးဘူး” တဲ့”
“ကြှနျတျော သူ့ကို အရမျးလေးစားမိတယျ… ကြှနျတျော သူ့လို တညျတညျငွိမျငွိမျ နဲ့ အဆိပျရှိတဲ့သူ ဖွဈခငျြခဲ့တယျ”
“နောကျတဈရကျမှာ ကြှနျတျော ရမွှေေ တဈကောငျနဲ့ တှတေ့ယျ… ရမွှေကေ ကြှနျတော့ကို ပွောတယျ”
“ငါက အဆိပျမရှိဘူး… ပြျောပြျောပဲနတေတျတယျ… ငါ့ကို လာရနျစ ရငျလညျး ငါဘာမှ မတုနျ့ပွနျဘူး.. ငါ့မှာ အဆိပျမရှိမှနျး သိတော့ ဘယျသူမှ ငါ့ကို မလေးစားကွဘူး…. ငါ့ကို ဟာသ တဈကောငျအဖွဈပဲ လူတှေ သဘောထားကွတယျ” တဲ့”
“ကြှနျတျော သူ့ကို စိတျအရမျး ပကျြမိတယျ… အဆိပျမရှိတဲ့ မွှတေဈကောငျက ဘယျနရောမှာ သှားပွီး အသုံးကပြါ့မလဲ.. ကြှနျတျော သူ့ကို အထငျသေးတယျ… အတုမယူ ထိုကျတဲ့သူမို့ ဝေးဝေးက ရှောငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ”
“ဒီအဖွဈအပကျြတှေ ဖွဈပွီး ဆယျရကျလောကျ ကွာတော့ ကြှနျတျော လယျသမားကွီး တဈဦးနဲ့ တှတေ့ယျ… သူ့ရဲ့ ပလိုငျးထဲမှာ မွှအေသေ နှဈကောငျကို တှလေို့ သခြော ကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတျောလေးစားရ တဲ့ မွှပှေေး နဲ့ မွှဟေောကျ ဖွဈနတေယျ”
“ကြှနျတျော ဘာမှ မမေးခငျမှာပဲ လယျသမားကွီးက ကြှနျတျော့ကို ပွောတယျ”
” ငါ့လယျထဲမှာ တှတေ့ာတော့ မွှကေ သုံးကောငျကှ…. ငါ သူတို့ကို မသတျခငျြပါဘူး… ဒါပမေယျ့ကှာ ဒီနှဈကောငျက အဆိပျရှိတဲ့ သတ်တဝါတှဆေိုတော့ လူတှအေတှကျ အန်တရာယျ ရှိလာနိုငျတယျ… ဒါကွောငျ့ပဲ သူတို့ကို သတျလိုကျရတာ… ကနျြတဲ့ တဈကောငျကတော့ ဘာအဆိပျမှ ရှိတဲ့အကောငျမလို့ သတျစရာ မလိုဘူးပေါ့ကှာ…” တဲ့”
“ကြှနျတျော နောငျတ တဈခုရလိုကျသလို… အသိတရား တဈခုလညျး ရလိုကျတယျ… “လောကမှာ အဆိပျမရှိတဲ့ သူက အန်တရာယျ အကငျးဆုံး” ဆိုတာကို… အဲ့ နကေ့ စပွီး ကြှနျတျော့ရဲ့ လှဲမှားနတေဲ့ အတှေးအချေါတှကေို ပွုပွငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ”
” ကိုယျ့ခန်တာမှာ ရှိတဲ့ အဆိပျဆိုတဲ့ အရာကို ဖယျထုတျပွီး… ငွိမျးခမျြးတဲ့ ဘဝ… လှတျလပျတဲ့ ဘဝတဈခုကို ရှာဖှဖေို့နဲ့.. ကွုံလာသမြှ အတိုကျအခိုကျကို အပွုံးနဲ့ပဲ တုနျ့ပွနျဖို့ပါ.”
Credit: Nyein (မောငျ့မူပိုငျရှငျ)
လောက မှာ အဆိပ်မရှိတဲ့ သူက အန္တရာယ် အကင်းဆုံး (အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်)
(မြွေဟောက် တစ်ကောင်က ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်)
“ငါကလျှင်မြန်တယ်… အဆိပ်ရှိတယ်… ငါ့ကို လူတွေကြောက်ကြတယ်” တဲ့” “ကျွန်တော်သူ့ကို အရမ်းအားကျမိတယ်… သူ့လို လျှင်မြန်ပြီး အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်”
“နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော် မြွေပွေး တစ်ကောင်နဲ့တွေ့တယ်… မြွေပွေးက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်”
“ငါက တည်ငြိမ်တယ်… ငါ့ဟာငါ အေးဆေးနေတယ် .. ငါ ဘယ်သူ့ကို မှ ရန်မရှာဘူး… ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုတော့ လာမထိနဲ့ ယင်ကောင်တောင် အလွတ်မပေးဘူး” တဲ့”
“ကျွန်တော် သူ့ကို အရမ်းလေးစားမိတယ်… ကျွန်တော် သူ့လို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်”
“နောက်တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော် ရေမြွေ တစ်ကောင်နဲ့ တွေ့တယ်… ရေမြွေက ကျွန်တော့ကို ပြောတယ်”
“ငါက အဆိပ်မရှိဘူး… ပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်… ငါ့ကို လာရန်စ ရင်လည်း ငါဘာမှ မတုန့်ပြန်ဘူး.. ငါ့မှာ အဆိပ်မရှိမှန်း သိတော့ ဘယ်သူမှ ငါ့ကို မလေးစားကြဘူး…. ငါ့ကို ဟာသ တစ်ကောင်အဖြစ်ပဲ လူတွေ သဘောထားကြတယ်” တဲ့”
“ကျွန်တော် သူ့ကို စိတ်အရမ်း ပျက်မိတယ်… အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေတစ်ကောင်က ဘယ်နေရာမှာ သွားပြီး အသုံးကျပါ့မလဲ.. ကျွန်တော် သူ့ကို အထင်သေးတယ်… အတုမယူ ထိုက်တဲ့သူမို့ ဝေးဝေးက ရှောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်”
“ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပြီး ဆယ်ရက်လောက် ကြာတော့ ကျွန်တော် လယ်သမားကြီး တစ်ဦးနဲ့ တွေ့တယ်… သူ့ရဲ့ ပလိုင်းထဲမှာ မြွေအသေ နှစ်ကောင်ကို တွေ့လို့ သေချာ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လေးစားရ တဲ့ မြွေပွေး နဲ့ မြွေဟောက် ဖြစ်နေတယ်”
“ကျွန်တော် ဘာမှ မမေးခင်မှာပဲ လယ်သမားကြီးက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်”
” ငါ့လယ်ထဲမှာ တွေ့တာတော့ မြွေက သုံးကောင်ကွ…. ငါ သူတို့ကို မသတ်ချင်ပါဘူး… ဒါပေမယ့်ကွာ ဒီနှစ်ကောင်က အဆိပ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေဆိုတော့ လူတွေအတွက် အန္တရာယ် ရှိလာနိုင်တယ်… ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့ကို သတ်လိုက်ရတာ… ကျန်တဲ့ တစ်ကောင်ကတော့ ဘာအဆိပ်မှ ရှိတဲ့အကောင်မလို့ သတ်စရာ မလိုဘူးပေါ့ကွာ…” တဲ့”
“ကျွန်တော် နောင်တ တစ်ခုရလိုက်သလို… အသိတရား တစ်ခုလည်း ရလိုက်တယ်… “လောကမှာ အဆိပ်မရှိတဲ့ သူက အန္တရာယ် အကင်းဆုံး” ဆိုတာကို… အဲ့ နေ့က စပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်”
” ကိုယ့်ခန္တာမှာ ရှိတဲ့ အဆိပ်ဆိုတဲ့ အရာကို ဖယ်ထုတ်ပြီး… ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝ… လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့နဲ့.. ကြုံလာသမျှ အတိုက်အခိုက်ကို အပြုံးနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်ဖို့ပါ.”
Credit: Nyein (မောင့်မူပိုင်ရှင်)
အဲကွန်းခန်းမှာ အနေများသူတွေ သတိထား လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၄ ချက်
ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်း သက်တမ်းကုန်ရင် ၊ ပြိုကျရင် အခန်းပြန်ရနိုင်မလား